Dredging ao amin'ny Pantai Cocoa, fanadihadiana amin'ny lakandrano kanadiana
Janoary 25, 2016
Central Sands dia mampiasa marika Ellicott® Ny toham-boaloboka any Swinging Ladder hanaterana zava-dehibe iray tamin'ity herinandro ity ho fanasitranana ny renirano Indiana Lagoon, minono fatana toy ny raon-kira am-polony avy amin'ny lakandranon'i Cocoa.
Ny alakamisy dia nanomboka ny fandotoana rano rehefa nanomboka nanala ny lakandrano namboarina tamin'ny lakandrano manaraka ny renirano Lananaon ny mpiasan'ny rano.
Ny tetikasa $ 2 tapitrisa dia ahitana ny fanakatonana ny lakandranon'i Jack / Kent manomboka amin'ny 8 am ka 5 tolak'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma mandritra ny efatra na enina herinandro manaraka, hoy ny sampana Brevard County Natural Resources Management.
Ny dingana voalohany amin'ny fananganana dredging dia nanomboka tao amin'ny avaratry Cocoa Beach teo amin'ny lakandrano manelanelan'i Jack Drive sy Kent Dr.
Hivoatra ny atsimo ilay tetikasa ary handoto lakandrano dimy hafa.
Central Sand Inc., miorina ao amin'ny Brevard County, dia hitroka ny kianja 83,000 cubic avy amin'ny lakandrano enina, hametraka ny zavatra babo ao amin'ny tanin'ny tanàna 10 any avaratr'i Lightwaters Drive.
Avy eo, aorian'ny fandehan'ny kamia dia handeha ho any amin'ny toerana maharitra akaikin'ny seranam-piaramanidina Space Coast Regional any Titusville.
Ny tetikasa dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny tanànan'i Cocoa Beach.
Muck - zavamaniry lo, tanety, ary tany avy amin'ny tranobe fananganana - dia oharina amin'ny "mayonnaise mainty." Manakana ny tara-pahazavana amin'ny ahidrano izy ary manampy amin'ny fahasimban'ny bakteria, izay mandany oksizenina ao anaty rano, ka mahafaty ny trondro.
"Ny lakandrano tsirairay avy dia haharitra telo herinandro eo ho eo (hanaovana dredge)," hoy i Matt Culver, mpandrindra ny programa momba ny sambo sy ny lalan-drano.
Ireo olompirenena mipetraka any atsimon'ny Lightwaters Drive dia tokony hanantena fifamoivoizana sy vovoka vitsivitsy, hoy ny tompon'andraikitra.
"Miezaka mafy izahay mba hampihenana ny fiantraikany amin'izy ireo," hoy i Wayne Carragino, mpitantana ny tetikasa ao an-tanàna.
"Hiverina amin'ny toe-javatra tany am-boalohany izy io rehefa vita," hoy izy momba ny tranokala manimba.
Ny tetikasa dia iray amin'ireo tetikasa dredging dimy izay hanala ny kitapo 1.4 tapitrisa cubic avy amin'ny lagoon, ampy vazo ampy hamenoana dobo filomanosana misy ny lalao Olaimpika amin'ny fotoana 437.
Fantsom-bolo valo mahery mitondra ny sludge avy amin'ny dredge mankany amin'ny faritra mitazona azy
mijanona ny solide ary atsofoka ny rano alohan'ny hiverenany any amin'ny làlambe.
Manohana ny fanantenana i Lagoon fa hanampy amin'ny fanasitranana ny lagoon mararin'ny voninkazo algama an-taonany maro. Ny “ahidrano lehibe” an'ny ahidrano maintso tamin'ny taona 2011 sy ny ahidrano volontsôkôlà manaraka dia namono ny 60 isan-jaton'ny ahidrano lagoon, ny refy amin'ny fahasalamana ara-tontolo iainana an'ilay nosy. Manatee, dolphins ary pelikanana an-jatony koa no maty taorian'ny famelana.
Ao amin'ny 2014 sy 2015 ny Lehiben'ny Florida dia nanome vola 20 tapitrisa mitambatra ho an'ny toerana maloto: ny vavan'i Turkey Creek any Palm Bay; lakandrano manaraka ny Sykes Creek sy ao amin'ny Cocoa Beach; ny lakandranon'i Grand sy ny lakandrano mifandray amin'ny Satellite Beach; ary rano manakaiky ny sambon'ny Jones Road ao Mims.
Ahitana vola $ 2.5 tapitrisa ao amin'ny Institut amin'ny Teknolojia Florida mba hianarana ilay teo aloha sy aorian'ny tetikasa fandevenana any Turkey Creek, ny famatsiam-bola.
Ny tetikasa Turkey Creek dia antenaina hanomboka amin'ny tapaky ny volana febroary. Manantena ny hamita ny tetik'asa amin'ny volana May ny tompon'andraikitra rehefa tsy misakana ny fandatsahan-drano ny fitsipika momba ny tontolo iainana noho ny manatees ao amin'ny farihy.
Ny rano dia miserana amin'ny alàlan'ny rano miadana kokoa rehefa mipetraka ao amin'ny faritra lehibe iray.
Muck - zavamaniry lo, tanety ary tany avy amin'ny tranobe fananganana - dia oharina amin'ny "mayonnaise mainty." Manakana ny tara-pahazavana amin'ny ahidrano izy ary manampy amin'ny fahasimban'ny bakteria, izay mandany oksizenina ao anaty rano, ka mahafaty ny trondro.
Elicott® Swinging Ladder dredge any avaratry Cocoa Beach
Manohana ny fanantenana i Lagoon fa hanampy amin'ny fanasitranana ny lagoon mararin'ny voninkazo algama an-taonany maro. Ny "superbloom" an'ny ahidrano maintso tamin'ny taona 2011 sy ny ahidrano volontsôkôlà manaraka dia namono ny 60 isan-jaton'ny ahidrano lagoon, ny barometatra amin'ny fahasalamana ara-tontolo iainana an'ilay fantsakana. Manatee, feso ary pelikanina an-jatony koa no maty taorian'ny famelana.
Ny famatsiam-bola dia misy $ 2.5 tapitrisa amin'ny Florida Institute of Technology handinihana ny mialoha sy aorian'ny ny tetikasa fanakorontanana any Turkey Creek handrefesana ny tombotsoan'ny tontolo iainana.
Aza adino ny mijery ny horonan-tsary.
Naverina navoaka Florida Today
Atombohy amin'ny tetikasan'ny Ellicott ny fametrahana ny làlan-drano famorian-dalanao